Sidee si ay u bilaabaan urur aan faa'iido doon ah | USAHello | USAHello
ururada Non-profit yihiin ururada caawiya dadka iyo arrimaha. Read oo ku saabsan sida loo bilaabo urur aan faa'iido doon ah oo caawinaya bulshada.
Weligaa mala yaabtay sida loo bilaabo urur aan faa'iido doon ah – Barnaamijka A ama urur yar si ay u caawiyaan bulshadaada? Waa kuwan tallaabooyinku qaar ka mid ah oo aad qaadi karto si aad u ogaato dhibaatada ka jirta bulshada, xal u heli, iyo inaan soo nooleeyo fikradda. Sidoo kale ugu baaqay ururada aan faa'iido-b “Charities”.
Qaxootiga iyo muhaajiriinta ay leeyihiin baahida gaarka ah waxaa laga yaabaa inay doonayaan inay wax ka qabtaan. Laakiin ka hor inta aad barato sidii aad u bilaabi urur aan faa'iido doon ah iyo caawin, hubi adeegyada kale ee la halkaas. Xaaladaha qaarkood, urur aan faa'iido doon ah oo kaa caawin kara hore u jirin.
1. Helitaanka baahida loo qabo in bulshada
Ku bilow si ay u xaliyaan dhibaatada mar kasta waa in la aqoonsado dhibaatada. عندما تفكر في كيفية بدء منظمة غير ربحية ، ما هي القضايا أو الاحتياجات التي تراها في مجتمعك؟ هل ترى الطلاب ينقطعون عن المدرسة أو الفصول الدراسية؟ قد ترى أن هناك حاجة لمساعدة القادمين الجدد الكبار في العثور على وظائف. Waxaad bilaabi kartaa fikirka ku saabsan xalka mar aad ka heli dhibaatada iyo aad u ogaato sida aad u caawin karto.
2. Xulashada iyo magaca diiwaangelinta
Marka aad go'aansato in aad habayso doon ahayn, waa in aad qaadato magacaaga ku tilmaamay. Waxaad dooran kartaa magac oo qeexaya waxa aad samayn urur aan faa'iido doon ahayn ama u adeegeen. ururada aan faa'iido-Qaar ka mid ah waxaa la isticmaalayo mid ka mid hadal oo keliya la fahmi karo. U hubso in aadan isticmaalin magaca by. Waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto xafiiska Office of the Secretary of State. Gobol kasta wuxuu leeyahay mid ka mid ah xafiisyada kuwan. Si aad ugu qortid magaca, waa in aad bixiso lacag yar oo ay soo gudbiyaan dokumanti loo yaqaan “qalabka Foundation”.
3. Codso in lagaa dhaafo canshuurta IRS
Non-profit ka dhigan tahay ma in ay lacag sameeyaan. waxay noqon kartaa ururada aan faa'iido-ka codsan in aan la bixin canshuurta on dakhliga. Waa in aad caddeysaa in aad ma heli doonto lacag adigoo buuxinaya foomamka. Adeegga Dakhliga Gudaha eegi doona daydo. Haddii ay kula tahay in aad tahay feature a, waxaad heli doontaa kiis 501 (c) (3).
4. qorshe hawleed Type
Waxaad u baahan doontaa qorshe hawleed, inkastoo aadan bilaaban doona ganacsi! Tani waa talaabo muhiim ah in sida loo tiriyo urur aan faa'iido doon ah. Haddii aan qorshe hawleed, aanad lahayn aragti cad tallaabooyinka aad u baahan tahay, iyo lacag aad u baahan tahay si ay u kicin, iyo sida aad ku gaari doonaa gool.
5. Integration ee aan faa'iido-
Marka aad hesho maqaal ururada aan faa'iido doon ahayn, waxaad dooran kartaa in ay iyaga ku milmaan. Tani waxay ku siin doonaa qaab-dhismeedka maamulka dheeraad ah oo lagu kalsoonaan karo in barnaamijyada iyo adeegyada aad. Dhigashada iyo khidmadaha kala duwan ee dalka. Shirkadda diiwaan urur aan faa'iido doon ah, laakiin ma aysan u dhigi 501 (c) (3) Dhaafidda.
6. Dhisidda golaha
Golaha xubnihiisa ayaa waa koox dad ah oo go'aannada ku saabsan ururka. Ma qaadin si ay u bixiso badanaa shaqo this. Waxay kaa caawin aqoonsado mashaariic kuwaas oo ka shaqeeya on ururka. Waxa ay sidoo kale ka caawiyay in ay kor u lacagaha iyo u sheeg dad kale oo ku saabsan ururka. Joogitaanka dad on board da'doodu kala duwan tahay, jinsiyadaha iyo xirfadaha keenaan fikrado cusub.
7. horumarinta miisaaniyadda
Inta lacag ee aad u baahan tahay si aad u bilowdaan aan faa'iido doon ahayn? Go'aanso haddii aad rabto in aad xafiiska jeexjeexay, oo haddii aad rabto in aad u kireeyo qof oo kale in ay ku caawiyaan. Qaado waqti aad u gashanayso qalabka aad u baahan tahay. Ka fikir oo ka mid ah sahayda iyo gaadiidka. Waxaa laga yaabaa in ay jiraan waxyaabo aad ka amaahan kartaa ama gorgortan ama ka soo jeeda bulshada ugu deeqay.
8. Helitaanka bulshadaada taageero
Marka aad sheeg bulshada bartilmaameed u ah, waxaad u baahan doontaa si ay u taageeraan. Connect la bulshadaada si aad u hesho dadka xaq iyo ururada kale si ay u taageeraan fikirka ah. Ka mid ah dadka muhiimka ah iyo hay'adaha oo u sheeg oo ku saabsan qorshayaashaada. Maktabadaha iyo aan faa'iido doon ahayn ururada iyo xarumaha meelaha weyn u dejinta in ay ku xidhmaan. Tusaale ahaan, haddii aad fikrad waa in dadka dhalinyarada ah ka ciyaaro kubada kolayga dugsiga ka dib, waxaad u wada shaqayn karaan xarun bulsho oo la tababarayaasha qaar ka mid ah.
Sida loo noqon ah agaasimaha guud ee aan faa'iido-
The hawlaha dhinaca maamulka dadweynaha
macluumaad Tax ururada samafal IRS
Sidee ayaan u soo qori qorshe hawleed?
Resources ka NOLO aan faa'iido-
Sidee si ay u dhexgalaan aad aan faa'iido-